Umgaqo-nkqubo wabucala we-Aplus Global Ecommerce Funda Oku
Umgaqo-nkqubo wabucala wenziwe ngononophelo kwabo banqwenela ukwazi ukuba "uLwazi lwaBantu" lusetyenziswa njani kwi-intanethi. Iinkcukacha zakho zisetyenziselwa ukuchonga, ukunxibelelana, ukufumana, okanye ukuchonga umntu ochaphazelekayo kule meko.
Nceda ufunde umgaqo-nkqubo wethu wabucala ukuze uqonde indlela esiyiqokelela ngayo idatha, siyisebenzise, ​​sikhusele okanye siphathe ngokwewebhusayithi yethu.
Iinkcukacha zobuqu eziqokelelwe sithi ngexesha lebhlog okanye utyelelo lwewebhusayithi
Emva kokubhaliswa kunye nefom yokubonisana, gcwalisa olu lwazi lulandelayo: Igama leNdwendwe, idilesi ye-imeyile, inombolo yomnxeba (Ngokuzithandela), kunye nezinye iinkcukacha kuxhomekeke kwinkonzo ekuvunyelwene ngayo.
Siluqokelela njani ulwazi?
Siqokelela ulwazi lwendwendwe ngexesha lokugcwalisa ifom yokubonisana, Incoko ebukhoma, okanye xa kubhaliswa kwindawo yethu.
Silusebenzisa njani ulwazi oluqokelelweyo?
Singasebenzisa ulwazi oluqokelelwe ngezi ndlela zilandelayo:
Ukwenza amava akho abe awakho kunye nokubonelela ngohlobo lomxholo kunye nemveliso onokuyithanda okanye ungayithanda kwixesha elizayo.
Nika inkonzo engcono ekuphenduleni umbuzo wakho okanye isicelo.
Ukucwangcisa ukuthengiselana kwakho.
Ukulinganisa kunye nokuphononongwa kweenkonzo okanye iimveliso esizibonelelayo.
Ukulandela ngaphambi kokubhalelana (ingxoxo ebukhoma, i-imeyile, okanye imibuzo yefowuni)
Asisebenzisi ukuskena kwengozi kunye / okanye ukuskena kwimigangatho ye-PCI.
Sinikezela kuphela ngamanqaku kunye nolwazi kwaye ungaze ubuze iinombolo zekhadi lakho letyala.
Ulwazi lobuqu ekwabelwana ngalo ngasemva kwenethiwekhi ekhuselekileyo kwaye inokufikelelwa kuphela ngabantu abanokufikelela okukhethekileyo kwidatha. Siyacelwa ukuba sigcine yonke idatha yakho eqokelelweyo iyimfihlo. Ulwazi olunobuthathaka olunikezwe nguwe lubhalwe ngokufihliweyo kusetyenziswa i-SSL (Layer Socket Layer).
Sithatha onke amanyathelo ngalo lonke ixesha ungena, ungenisa, ufikelela kulo naluphi na ulwazi ukuqinisekisa ukhuseleko oluphezulu.
Zonke iintlawulo zenziwa kusetyenziswa isango lokuhlawula kwaye akukho ndlela sinokuyenza okanye sizimisele ukugcina idatha kwiiseva zethu.
Sicela imvume yakho ngaphambi kokuqokelela ii-cookies. Unokukhetha ukwamkela okanye ukucima zonke ii-cookies.
Sicela ikuki ukubonelela ngamava awenzelwe wena ngakumbi. Ngokucima iicookies ezinye zewebhusayithi zinokungasebenzi kodwa usenakho ukufaka iiodolo.
Asithengisi, sithengise, okanye sitshintshele nawuphi na umntu ongomnye ngaphandle kokuba oko kufunwa yinkonzo ekuvunyelwene ngayo.
Asiboneleli ngalo naluphi na uhlobo lwenkxaso yomntu wesithathu okanye iinkonzo.
Iimfuno zentengiso zikaGoogle zinokushwankathelwa yimigaqo yokuthengisa kaGoogle. Zibekwe endaweni ukubonelela ngamava amahle kubasebenzisi. Jonga apha.
Ukumaketha nge-Google AdSense
Ukubikwa kweNgcaciso yeNethiwekhi yeGoogle
Amanani kunye neNzala yokuBika
Thina kunye nabathengisi benkampani yesithathu, ezinje ngeGoogle sisebenzisa ii-cookies zomntu wokuqala (ezinje ngeicookies zikaGoogle) kunye nee-cookies zomntu wesithathu (ezinjengecookie yeClickClick) okanye ezinye izinto zokuchonga umntu wesithathu kunye ukudibanisa idatha ngokubhekisele ekusebenzeni komsebenzisi Iimpawu zentengiso kunye neminye imisebenzi yenkonzo yentengiso njengoko inxulumene newebhusayithi yethu.
Thina nabathengisi bethu benkampani yesithathu sisebenzisa ii-cookies zomntu wokuqala (ze-analytics) kunye nee-cookies zomntu wesithathu (i-DoubleClick Cookie) okanye ezinye izinto zokuchonga umntu wesithathu ukuqokelela idatha yokubonisa intengiso kunye neminye imisebenzi enxulumene newebhusayithi yethu.
Ikhonkco lethu loMgaqo-nkqubo wabucala libandakanya igama elithi 'Ubumfihlo' kwaye linokufumaneka ngokulula kwiphepha elingentla.
Abasebenzisi baya kufumana isaziso malunga notshintsho kumgaqo-nkqubo wabucala:
Abasebenzisi banakho ukutshintsha ulwazi lwabo buqu:
Siqokelela idilesi yemeyile yakho ukuba:
Ukuthumela ulwazi, impendulo kwimibuzo, kunye / okanye ezinye izicelo okanye imibuzo.
Ukuqhubekeka kweeodolo, ukuthumela ulwazi, kunye nohlaziyo ngokulandelelana okunxulumene noko.
Siyayisebenzisa ukuthumela ulwazi olongezelelekileyo olunxulumene nenkonzo ekuvunyelwene ngayo.
Intengiso yeenkonzo zethu zamva nje kunye nokunikezelwa kubaxhasi bethu emva kokuba intengiselwano yoqobo yenzekile.
Kwimeko apho naliphi na ixesha unqwenela ukungabhalisi kwi-imeyile yethu yexesha elizayo usithumelele i-imeyile ku info@aplusglobalecommerce.com Kwaye siya kukususa kuyo yonke imbalelwano yexesha elizayo.
Ukuba kukho nayiphi na imibuzo malunga nalo mgaqo-nkqubo wabucala ungaqhagamshelana nathi usebenzisa ulwazi olungezantsi.
ifowuni: + 1 775-737-0087
Nceda linda iiyure eziyi-8 ukuya kwi-12 ukuba iQela leNkonzo yaBathengi bethu libuyele kuwe kwingxaki.